Nge kusondela samaholidi abadala sebeqala ukucabanga ngalokho ingane yakho isikhathi kufike uNyaka Omusha. Lo mbuzo lubalulekile ikakhulukazi uma kwenzeka ukuthi akufanele pha omunye umntwana nezingane eziningana ubudala ezahlukene.
Ubudala - nenqubo main lapho ukhetha isipho
Kukhetsa kutsi nguyiphi ukunikeza ingane yakho isikhathi kufike uNyaka Omusha, kuyoba kancane inkinga uma abantu abadala bazobabona acabangele izici yobudala kwengane yakhe. Ngokwesibonelo, ingane engaphansi kweminyaka emibili ubudala, njenganoma iyiphi ithoyizi. Lapha, lokuthi kumele sinake kuphela khona izakhi ukuthi kusongela ukulondeka. Ngakho, amathoyizi kanye imiphetho ebukhali ephuma akufanele ukuthenga imininingwane encane.
Yini ukunikeza ingane ku uNcibijane eneminyaka engu-iminyaka emibili kuya kweyisikhombisa? Kukhona akwanele ezivamile izilwane kancane ethambile noma ibhokisi loshokoledi. Phakathi nale minyaka, izinyane ngenkuthalo kuthatha ulwazi mayelana nezwe futhi ithuthukisa ezihlukahlukene amakhono. Ngakho-ke, isipho okufanele asathuthuka. Kungaba kit ngenalithi, yokumodela, abaklami, amabhlogo thematic, puzzle, puzzle, amakhompyutha zezingane zokufundisa, amathoyizi mechanical, amathuluzi electronic zomculo.
Isipho kufanele bacabangele izithakazelo wengane
Akunzima zokunquma ukuthi waba ini ukunikeza ingane ukuba kufike uNyaka Omusha, uma abadala bayasazi uhla izithakazelo abalungiselela ukumangala. Izingane eziningi uthando ezemidlalo. Ngakho-ke, ibhayisikili noma izesekeli hockey, roller noma sibalo skates, ibhola noma i-baseball, baseball nelulwane noma igilavu isibhakela isiqiniseko ukujabulisa ingane. Nakuba hhayi ezizoqhubela akunika Geek induku hockey, umculi - amagilavu isibhakela sengathi abadala ungafuni ukubandakanya umuntu omncane ezemidlalo. Mhlawumbe siyeke abakuhlelela Ngokuzayo nesamanje yilokhu afuna: Geek - igajethi entsha, umculi - i Iyizeli kanye nesethi opende, ufuna ukwazi ukudlala isiginci - insimbi yomculo futhi kufundisa.
Izipho for girls
Ngokungafani namandla ocansini amantombazane, ngisho esemncane avame ukuba esihle. Yingakho jewelry elikhanyayo, hairpins, amasethi izimonyo zezingane cishe ngeke ukunambitha kubo. Futhi ngokumelene semfashini amantombazane amahle zanoma iyiphi iminyaka ngeke abe nandaba. Nakuba namuhla abathanda ukuba agqoke futhi abafana. Kodwa namanje ngempela ahileleke izingubo umnikelo izingane, ngoba ezingqondweni zabo umthetho imisiwe: izingubo nezicathulo kudingeka bathenge abazali, kuba ukukhathazeka kwabo kwansuku zonke. Futhi izipho izingane loNyaka Omusha kumele sifane iphupho - iholide of a fabulous, imilingo! Futhi ezingalindelekile ezingaphezu kuka isipho esimangalisayo, injabulo xaxa futhi injabulo lapho attribute kuyodingeka yona.
Hhayi kuphela amathoyizi New Year izingane kungaletha injabulo enkulu. Ticket Amaholide ngokuhlanganyela, amatende cafe zezingane izinhlamvu kumnandi, eya kwelinye idolobha ukuhlala nezihlobo nakho kungase kube isipho esihle kakhulu. Amathikithi ukusebenza kwanoma iyiphi imfashini rock bands uqiniseka ukujabulisa intsha. Futhi izingane uzobe ugibele ngokujabula ukubona endlini yakhe le Santa Claus Isithwathwa Ntombazane.
Cybex - stroller, ezithinta ukusebenza yayo futhi waba nokwethenjelwa
"Allohol" kanjani ukwamukela. iseluleko kuchwepheshe
Ihhotela Munamar Beach & Residence Ihhotela, Turkey: i Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza